अन्य देवी–देवताहरु – बाल – Daily Devotion
अन्य देवी–देवताहरु – बाल
पुरानो करारमा इस्राएलीहरुलाई केवल एक परमेश्वरको मात्र आराधना गर्न आज्ञा गरिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो भनी सोध्दा येशूले भन्नुभयो, “हे ईस्राएल, सुन, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर । ” (व्य. ६ः४–५, मत्ती २२ः३५–३७) ।
तर इस्राएलीहरुले धेरै देवी–देवताहरुको पूजा गरे जस्तै बाल, अस्तोरेत, असेरा, कमोश र मोलेख ।
यहोशूको नेतृत्वमा इस्राएलीहरुले करीब १४०६ इ.पू.मा कनान आक्रमण गर्दा त्यहाँका कनान वाशीहरुले स्थानीय “बाल” अथवा “बाली” देवताको पूजा गर्थे । बाल देवता “एल” का पुत्र हुन भनी विश्वास गरिन्थ्यो जो प्रमुख देव मानिथ्यो । “एल” शब्दले हिब्रुमा परमेश्वर जनाउँछ ।” बाल को अर्थ प्रभु वा मालिक पनि हो ।
त्यस समयमा कहिलेकाँही स्थानीय ठाँउको नामद्धारा पनि “बाल” देवता चिनिन्थ्यो, जस्तै पोरको बाल देवता (गन्ती २५ः३), बेथ–बाल–मोन (यहोशू १३ः१७) र बाल–हासोर (२ शमूएल १३ः२३) । पछिल्लो समयमा “बाल” कनानीहरुले उर्वरा देवको रुपमा लिन थाले जसले पृथ्वी र अन्नमा उब्जनी दिन्छ । सुरुमा कनानीहरुले मात्र स्थानीय रुपमा बाल पुजा गर्ने गर्थे तर पछि अन्तर–विवाहको कारण इस्राएलमाझँ पनि यस्तो पैmलियो । उदाहरणको लागि आहाब राजाले करीब ८७४ ई.पू. मा इजबेलसँग विवाहा गर्दा विभिन्न अन्य देवताहरु इस्राएलमा भित्र्याए ।
एलियाले कर्मेल डाँडामा बालका अगमवक्ताहरुसँग सामना गरे (१ राजा १८ः१६—४०) । सामरीयमा राजा यहूले बालको मन्दिरमा धेरै बालका अगमवक्तहरुलाई मारे (२ राजा १०ः१८–३१) । राजा योशियाहले पछिल्लो समयमा इस्राएलबाट बाल देवता हटाउन उल्लेखनिय प्रयत्नहरु गरे (२ राजा २३ः१–७) । यसरी बारम्बार इस्राएलका परमेश्वरका आराधक र बाल आराधकहरुबीच लडाई भइरहन्थ्यो ।
बाल पुजा प्रक्रियामा व्यविचार लगायत अन्य घिनलाग्दा अनैतिक क्रियाकलापहरु हुने गथ्र्यो । यस समयमा बालकको बली हुनुका साथै अस्तोरेत र अशेरा देवीका साथमा विभिन्न मन्त्रतन्त्र हने गथ्र्यो ।
कर्मेल डाँडा जहाँ एलियाले बालका अगमवक्तहरुलाई हराए
यहोशूले जितेको उत्तरी भेगको अग्लो भेगमा बाद–गाद भन्ने स्थान थियो जहाँ बालको पुजा गरिन्थ्यो । पछि गएर यस स्थानमा नाम फिलिप्पको कैसरिया भयो । येशू पनि एकपटक यस अन्यजातिको स्थानमा हुनुभयो र भन्नुभयो, “मानिसहरुले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन् ?” । पत्रले भने “तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र ।” (मत्ती १६ः१३–१६) ।
शेकेममा बस्ने कनान वासीहरुका अर्को देवता बाल बेरिथ थियो । राजा अबिमेलेकले बाल बेरिथको मन्दिरमा शेकेम वासीहरुलाई जलाएका थिए (यहो. ८ः३३, ९ः४६–४९) ।
बाल जिबुब (अर्थात झिंगाहरुका देव) एक्रोनका देव थिए । एलिया अगमवक्ताले राजा अहजियालाई यस देवताकहाँ जान मनाही गरेका थिए (२ राजा १ः१–१६) । नयाँ करारमा यशूलाई पनि फरिसीहरुले यस्तै आरोप लगाएका थिए (मत्ती १२ः२४) ।
करिब ९४० ई.पू. मा राजा सोलोमोन उमेरमा वृद्ध हुदै गए र आफ्ना धेरै उपपत्नीहरुका कारण बाल, मोलेख र कमोशजस्ता अन्य देवताहरुका आराधना गर्न राजकिय अनुमति दिए (१ राजा ११ः१–६) ।
Tags: ancient gods, baal, israel
विश्वासीहरुप्रति हाम्रो वास्ता कस्तो हुनुपर्छ ? ( १ थेस. ३ः१-७)